अमेरिकामा नक्कली बिहे गर्ने नेपालीलाई एक महिनाको जेल सजाय, ४ हजार डलर जरिवाना
अमेरिकाको मेनमा बस्ने एक महिलालाई नक्कली विवाह गर्नका लागि पैसा तिर्ने एक नेपालीलाई बुधवार एक महिनाको कारावास सजाय दिइएको छ । देशमा बसिरहन र काम गरिरहनका लागि उनले नक्कली विवाह गरेका थिए ।
क्यालिफोर्नियाको कुपर्टिनोमा बस्ने एइलोभ श्रेष्ठले बांगोरमा रहेको यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्टसमक्ष दोष स्वीकार गरेका छन् । वैवाहिक ठगीको मामिलामा उनले दोष स्वीकार गरेका हुन् ।
न्यायाधीश लान्स वाकरले श्रेष्ठलाई एक महिना कारावास सजायका साथै दुई वर्ष निगरानी (प्रोबेसन)मा बस्नुपर्ने अनि चार हजार डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने सजाय पनि दिएका छन् । न्यायाधीशले श्रेष्ठलाई फेब्रुअरी २६ मा कारागारसमक्ष हाजिर हुन आदेश दिएका छन् । त्यतिखेरसम्मका लागि उनी पाँच हजार डलर जमानत तिरेर स्वतन्त्र छन् ।
वाकरले श्रेष्ठमाथि दोष ठहर भएका कारण उनलाई नेपाल फिर्ता पठाइने सम्भावना रहेको बताए ।
‘तिमी सुशिक्षित, मेधावी र मेहनती छौ,’ वाकरले सजाय दिँदै गर्दा श्रेष्ठलाई भने । ‘तर तिमी आँँखा खोलेर ठगीमा लाग्यौ । के गरिरहेको छु भन्ने तिमीलाई थाहा थियो । सही काम गर्ने कि अवैध काम गर्ने भन्ने विकल्प तिमीसमक्ष हुँदा तिमीले अवैध बाटो रोज्यौ ।’
श्रेष्ठले आफ्ना क्रियाकलापका लागि माफी मागे अनि आमाको चिन्ता लागेको बताए । उनकी आमा क्यालिफोर्नियाको सारातोगामा रेस्टुराँ चलाउँछिन् र अंग्रेजी बोल्न जान्दिनन् । उनी आमासँगै काम गर्छन् ।
‘म त्यहाँ भइनँ भने रेस्टुराँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले परिवारमा असर पार्छ,’ उनले वाकरलाई भने । कारावास सजाय भन्दा पनि प्रोबेसनमा आफूलाई राखेहुन्थ्यो भनी उनले अनुरोध गरे ।
उनका प्रतिरक्षक वकिल वर्ने पारादी जुनियरले सन् २०१८ मा श्रेष्ठसँग अस्थायी संरक्षित हैसियत (टेम्पोरेरी प्रोटेक्टिभ स्टेटस) रहेको बताए ।
‘ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई स्थगित गर्‍यो अनि उनी आत्तिए,’ वकिलले भने ।
श्रेष्ठ नर्थ क्यारोलाइनामा बसिरहेका थिए र उनले १८ महिनाअघि अमेरिकी महिलासँग विवाह गर्न खोजेका थिए किनकि उनको कामदार भिसा सन् २०१८ को जुन २४ मा सकिँदैथियो । त्यसै वर्षको जुन १३ मा उनले अन्लाइन भेटिएका चारजनालाई इमेल पठाए र अनि प्रत्येकलाई स्थायी निवासी हैसियत अर्थात् ग्रीन कार्ड पाउनका लागि विवाह गर्न चाहेको बताए ।
ह्याम्पडेनमा बस्ने मारेना मुशेरोले १३ हजार डलर लिएर श्रेष्ठसँग विवाह गर्न सहमति जनाइन् । उक्त रकम किस्तामा तिर्नुपर्ने थियो । उनले ग्रीन कार्डका लागि विवाह गर्न इच्छुक व्यक्तिसँग पैसा लिएर बिहेका लागि तयार रहेको भनी अन्लाइन विज्ञापन गरेकी थिइन् ।
इमेल, एसएमएस र फोन कलहरूमा श्रेष्ठ र मुशेरोले सूचना आदानप्रदान गरे अनि सन् २०१८ को जुन २५ मा ब्रुअर भन्ने ठाउँमा नोटरी पब्लिकसमक्ष विवाह गरे । उनीहरूले विवाह समारोहको तस्वीर बांगोर क्षेत्रमा रहेको एक रेस्टुराँ र मोटेलमा खिचे । त्यस मोटेलमा श्रेष्ठ दुई दिनसम्म बसे अनि विवाहलाई वैधता दिने कागजात तयार पारे । श्रेष्ठले मेनबाट जानुअघि मुशेरोसँग संयुक्त बैंक खाता र मोबाइल फोन अकाउन्ट खोले ।
श्रेष्ठले त्यसपछि मुशेरोलाई सन् २०१८ को जुन २१ देखि जुलाई २५ सम्म तीन हजार डलर पठाए । त्यसै वर्षको अगस्ट महिनामा मुशेरोलाई चोरीको आरोपमा प्रोबेसनको उल्लंघन गरेकोमा पक्राउ गरियो । त्यसपछि उनले अगस्ट ६ मा अधिकारीहरूलाई नक्कली विवाहको कुरा सुनाइन् ।
मुशेरोले मेन करेक्सनल सेन्टरमा १० महिनाको कारावास सजाय भोगिरहँदा श्रेष्ठले उनलाई पैसा पठाउन छोडे । उनी पक्राउ परेपछि उनीहरूबीचको संवाद बन्द भयो ।
मुशेरोलाई गत अप्रिल महिनामा पाँच वर्षको प्रोबेसन सजाय दिइएको छ । वैवाहिक ठगीको आरोपमा उनले दोष स्वीकार गरेपछि सजाय दिइएको हो ।
संघीय दण्ड निर्देशिकाअन्तर्गत श्रेष्ठले ६ महिनासम्मको कारावास सजाय भोग्नुपर्ने थियो । सहायक न्यायाधिवक्ता क्रिस रुगेले श्रेष्ठलाई दुई महिनाको कारावास सजायको माग गरेका थिए । प्रतिरक्षक वकिलले भने मुशेरोलाई जस्तै आफ्नो पक्षलाई पनि प्रोबेसनमै राख्नका लागि न्यायाधीश वाकरसमक्ष अनुरोध गरेका थिए ।
पोखरामा एशियन टुर प्याराग्लाइडिङ वर्ल्डकप शुरू, २० ...
खैरो हिरोइनसहित पक्राउ
भत्ता उपलब्ध नगराएपछि स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसूति गराउन...
महाशिवरात्रिका साधुलाई वर्गिकरणका आधारमा दक्षिणा
दलदलमा प्रधानमन्त्री ओली : यी हुन् असफलताका मुख्य २ कारण !
बाबुरामले भने, 'चुनाव हारेकालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु लोकतन्त्रको हत्या हो'
त्यो ‘ज्यानमारा टेलिफोन’: जो ८० वर्ष अघि बनेको थियो लाखौँको मृत्युको कारक
फरार अभियुक्त २१ वर्षपछि पक्राउ
काेराेना ‘ठूलो स्वास्थ्य संकट’ : चिनियाँ राष्ट्रपति
पहेँलो गाउनमा बोल्ड मलाइका
श्रीमानको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमतिविरुद्ध मुद्दा
अनुहारमा अधिक फेशियल गराउनुहुन्छ ? देखिन सक्छन् यी असर